नेपाली समाज रूपान्तरणमा भारत
नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा भारतका खासगरी कलकत्ता, बनारस, दार्जिलिङ, सिक्किमलगायत अन्य सीमावर्ती क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहँदै आएको छ । नेपाली राजनीति परिवर्तनको संवाहक शक्ति नेपाली काँग्रेसको कलकत्तामा भएको स्थापनादेखि अध्ययनका लागि बनारस पुगेका नेपाली विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धिसँगै त्यहाँबाट छापिएको गोर्खाभारत जीवन पत्रिका यसका उदाहरण हुन् ।
अन्य मुलुकबीच सरकार–सरकारको सम्बन्धले दुई देशको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ तर नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध जनस्तरले निर्धारण गर्ने गरेका छ । औपचारिक रूपमा स्थापना गरिने कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा नेपाल–भारतका जनताबीच हुने सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यावसायिक अन्तरक्रियाले यहाँको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने गर्छ । त्यसैले पनि नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई ‘विशेष सम्बन्ध’ भन्नु परेको हो । मैले खेलेको नरङ्गे खोला काशीमा मिसिएको छ । त्यसलाई म काशीको विशाल प्रवाहमा देख्न सक्छु । अनुभव गर्न सक्छु । मसँग मिल्ने सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता भारतीय नागरिकका अन्तरक्रियामा पाउँछु । त्यसैले भारत र नेपालको सम्बन्ध विशेष छ । यसै भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइराला चीनको भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ अध्यक्ष माओ–त्से–तुङ्ले ‘बी.पी., तपाईंहरूले भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर विशेष सम्बन्ध भारतसँगै राख्नुपर्छ’ भनेर एउटा साश्वत भनाइ राख्नुभएको थियो । नेपालले व्यावहारिक परराष्ट्र नीति तय गर्दा चीनका महान् नेता माओ–त्से–तुङ्का भनाइलाई ध्यान दिर्नैपर्छ । यसका विशेष कारण छन्, जसबाट न नेपाल न भारत विमुख रहन सक्छ । अन्य देशले पनि नेपाल–भारतबीच रहेका स्वाभाविक–बाध्यात्मक सम्बन्धलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ, जसरी माओले सत्य उजागर गर्नुभयो ।
नेपालको प्रजातान्त्रीकरणमा भारतले समर्थन र सहयोग गरेको छ । यसैगरी भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रममा नेपाली नेता बी.पी., गणेशमान, मातृका कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो । अङ्ग्रेजविरुद्धको ‘भारत छोड’ आन्दोलनमा भारतीय नेतालाई सप्तरीको हनुमान नगरस्थित जेलबाट मुक्त गर्न नेपाली काँगे्रसको तत्कालीन नेतृत्वको आह्वानमा डा. झमनराम पासवन र काले कामीजस्ता योद्धाले सहयोग गर्नुभएको इतिहास हामीसँग छ । त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएका छन् । चेतना र स्वाभिमानसँग अन्तरनिहित छन् ।
यस्ता आपसी राजनीतिक योगदानका अतिरिक्त भारतमा पढ्न गएका भानुभक्त आचार्य र मोतीरामजस्ता युवाले नेपालमा साहित्यमार्फत सामाजिक जागरण तथा रूपान्तरणका लागि योगदान दिएका थिए । भानुभक्तलाई हामीले आदिकविका रूपमा सम्झिरहँदा उहाँलाई आदिकवि बनाउने शिक्षा र चेतनाको उर्वर भूमि बनारस वा दार्जिलिङलाई बिर्सन हुँदैन । यसैगरी बनारसबाट नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका गोर्खाभारत जीवन (वि.सं. १९४८) प्रकाशन गरी मोतीराम भट्ट र उहाँका मण्डलीले नेपाली साहित्यमार्फत यहाँको समाज रूपान्तरणमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दा बनारस र त्यहाँ उपलब्ध नेपाली साहित्यमैत्री वातावरण बिर्सन सकिँदैन । यसैगरी दार्जिलिङ, सिक्किम र ती क्षेत्र वरपरबाट विशिष्ठ नेपाली साहित्यकार नेपाली साहित्याकाशमा उदाउनुभएको सत्य छोप्न सकिँदैन । नेपाली समाजमा ‘आधा पेट खाना बनारस जाना’ भन्ने उखान स्थापित हुनुको अर्थले पनि बनारस र नेपाली समाज कसरी जोडिएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा भारतबाट राजनीति र साहित्यमार्फत विशिष्ठ योगदान पुगेको देखिन्छ । यसैगरी आर्थिक तथा रोजगारीको योगदान पनि छ, जसले पनि सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्छ ।
अहिले पनि नेपाली विद्यार्थीले भारतका काशी हिन्दु विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न संस्थाबाट नेपाली भाषा साहित्यमा शिशु कक्षादेखि विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन अध्यापनको अवसर पाइरहेका छन् । भारतको संविधानमा नेपाली भाषालाई भारतीय भाषाका रूपमा सूचीकृत गरिएपछि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली भाषा, साहित्य तथा कलाको अध्ययन अनुसन्धानमा थप सहजता मिलेको काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, भारतीय भाषा विभागका अध्यक्ष प्रा. डा. दिवाकर प्रधान बताउनुहुन्छ । शुरुमा भारतीय भाषा विभागअन्तर्गत ‘नेपाली’ भाषालाई पनि राखिएको सुन्दा टर्रो लाग्छ तर यहाँ बुझाईको सीमितता रहेको हुने रहेछ । यस सन्दर्भमा दुई वटा सत्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ । एक, नेपाली भाषालाई भारतले छिमेकी मुलुक नेपालको भाषा भनी माया गरेर संविधानमा अनुसूचीकृत गरेको होइन । भारतमा बोलिने नेपाली भाषालाई भारतले संविधानमार्फत ‘क्यापिटलाइज्’ गरेको वा स्वामित्व लिएको हो । आफ्नो भाषा बनाएको हो । नेपालको सीमापारि भारत पुगेपछि नेपाली भाषा पनि भारतको भाषा हुने भएकाले उसले आफ्नो देशमा बोलिने भाषाको संरक्षण वा प्रवद्र्धनका लागि तामिल र कर्णाटकीजस्तै नेपाली भाषाको अध्ययन अध्यापन पनि सुनिश्चित गर्दै आएको हो ।
अर्को कुरा, त्यहाँ नेपाली भाषालाई विदेशी भाषाका रूपमा छुट्टै अध्ययन अध्यापन गर्न गराउन पाइन्छ तर त्यसका लागि नेपाली भाषा साहित्य पढ्ने विद्यार्थीले अन्य विदेशी भाषा पढ्दा तिर्नुपर्ने सरह शुल्क तिनुपर्ने छ । यो आमनेपाली भाषी विद्यार्थीका लागि सम्भव हुँदो रहेनछ । त्यसैले भारतीय भाषाअन्तर्गत नेपालीको अध्ययन गर्नु सहज हुने रहेछ । अनि नेपाली भाषा नेपालको आफ्नो मात्र भाषा हो भनेर खुम्चनु पनि हुँदैन । भोलि अर्को देशले पनि नेपालको भाषालाई आफ्नो भाषा भनेर मान्यता दिन सक्छ । यो त हाम्रा लागि सुखद परिणाम हो । यो नेपाली भाषाको विश्वव्यापीकरणको प्रक्रिया हो ।
भाषा र साहित्यका मात्र कुरा होइन, भारतका खासगरी वनारसक्षेत्रका मन्दिरमा रहेका अधिकांश पण्डित, पुजारी, व्यवसायीले जुन प्रतिष्ठित जीवनयापन गर्ने अवसर पाएका छन्, त्यसबाट नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा सीधा प्रभाव पार्ने नै भयो । समाजशास्त्रीका अनुसार ठूलो र प्रभावी देश, समाज वा संस्कृतिले सानो सांस्कृतिक क्षेत्रमा आफ्नो बढी प्रभाव पर्छ । भारतमा नेपालीले पाउने रोजगारी, उतातिर हुने नेपालीको अन्तरक्रिया, त्यहाँको सशक्त सञ्चारले नेपाली समाज रूपान्तरणमा व्यापक भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसको तुलनामा नेपालको प्रभाव कम रहनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्ता तŒवलाई समाजशास्त्रीले सामाजिक रूपान्तरण वा सामाजीकरणका औजारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा, खासगरी औचपारिक सम्बन्ध जो सरकारी तहमा निर्धारण गरिएको छ, त्यसमा गडबडी भएका अनुभव हामी नेपाल–भारत दुवै पक्षसँग छन् । जनस्तरको सम्बन्धमा यस्तो गडबडी आउँदैन, किनभने यो सम्बन्ध मानिसले नभएर भूगोल, संस्कृति र अटुट सामाजिक अन्तरक्रियाको जगबाट बनेको हुन्छ । कुनै सरकार वा व्यक्तिका कारण यस्ता सम्बन्धमा उतारचढाव आउन सक्दैन । हाम्रा सम्बन्धलाई ‘कल्चरल इकोलोजी’ का दृष्टिले व्याख्या गर्न सकिन्छ, जो यहाँको भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरणले निर्धारण गरेका छन् । जब भारत तिर्खाउँछ हामी नेपालीले कोशी भएर उनीहरूको तिर्खा मेटाइदिनुपर्छ । जब नेपाल खडेरीमा सुक्छ, तब भारतले बङ्गालको खाडीबाट बादल र पानी नेपाल पठाइदिनुपर्छ र बर्सनुपर्छ । यी प्राकृतिक घटनाले पनि हाम्रा सम्बन्ध निर्धारण गर्छन् भने हामी कसरी राजनीतिक तवरको अर्थात् मानिसले निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा मात्र सीमित हुन सक्छौँ ?